Zaw Htet: ဆရာတော်ဦးဇောတိက ၏ တရားတော်များမှကောက်နှုတ်ချက်များ
ဆရာတော်ဦးဇောတိက ၏ တရားတော်များမှကောက်နှုတ်ချက်များ
1) နေ့စဉ်ပဲ စာမေးပွဲ အစစ်ခံနေရတယ်၊ သင်ခန်းစာတိုင်းဟာ စာမေးပွဲ၊ အတွေ့အကြုံတိုင်းဟာ သင်ခန်းစာပဲ။
2) ဘ၀ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နေသွားချင်တယ် ဆိုရင် သတိလေးနဲ့ နေလိုက်ပါ။ ဘ၀ဟာ ရှင်းလာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ရှင်းရင် ဘ၀ ရှင်းတယ်၊ စိတ်ရိုးရင် ဘ၀ ရိုးတယ်၊ စိတ်ရှုပ်ရင် ဘ၀လည်း ရှုပ်လာမယ်၊ စိတ်ဆန်းပြားရင် ဘ၀လည်း ဆန်းပြားလာမယ်။
3) စိတ်ရှင်းရင် ဘ၀လည်း ရှင်းပါတယ်၊ အသိညဏ်လည်း ရှင်းပါတယ်၊ စိတ်မရှင်းရင် ဘ၀လည်း မရှင်းဘူး၊ အသိညဏ်လည်း မရှင်းဘူး။
4) စာမေးပွဲမှာ ကိုယ်တကယ်တတ်တာကို ဖြေဖို့ထက် အမှတ်ရဖို့ အဓိက ထားပြီး ခိုးဖြေတာတွေ ဖြစ်လာသလို အပြင်လောကမှာလည်း လူအထင်ကြီး ခံရဖို့ အဓိကထားရင် ဟန်လုပ်ပြီးနေပြရတယ်။ အဲ့ဒါ ဘ၀ စာမေးပွဲကို ခိုးဖြေနေတာပဲ။
5) ဘ၀ကို အနှစ်သာရအပြည့်နဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေချင်ရင် လောကကြီးကို အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အကျိုးပြုချင်ရင် ၊ အေးချမ်း တည်ငြိမ်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်ရင် ၊ ကိုယ့်အချိန်တွေကို အထိရောက်ဆုံး အသုံးချချင်ရင် အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်း ၊ တစ်ခဏတိုင်း တစ်ခဏတိုင်း သတိလေးနဲ့ နေလိုက်ပါ။
6) ကိုယ့်ဘ၀ကို စည်းကမ်းရှိရှိ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားချင်ရင် ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိအောင် လုပ်ရမယ်။ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ အဖြစ်နည်းပြီး ကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမယ်။
7) လူတိုင်းလူတိုင်း ဘ၀တစ်ခုလုံးမှာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှရွေးချယ်မှု့တွေ လုပ်နေရပါတယ်။ ရွေးချယ်တာ ဆုံးဖြတ်တာ မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။
8) အလုပ်ဟာ လူ့ဘ၀မှာ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ “ ဒါကို လုပ်ဖို့ ငါ လူဖြစ်လာတာပါ ” လို့ပြောနိုင်လောက်တဲ့ အလုပ်က ဘယ်အလုပ်လဲ။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ တကယ်အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတွေကို စိတ်မပါပဲ လုပ်နေရတယ် ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု့မရှိတဲ့လူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ္စာမရှိတဲ့သူ ဖြစ်နေတယ်။
9) ဘ၀ဆိုတာ စိတ်နဲ့တန်သလို ဖြစ်တာပါ။
10) ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အမြင့်ဆုံး အရည်အသွေးတွေကို အများဆုံးထွက်ပေါ်လာအောင် လုပ်နေရတာ ကြိုးစာနေရတာဟာ ဘ၀မှာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
11) ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ကျေကျေနပ်နပ် နေချင်တယ်ဆိုရင် သက်သက်စာစာ မနေပါနဲ့၊ ကြိုးစားပါ ၊ အရည်အချင်းများများထုတ်ပါ။ အရည်အချင်းများများထွက်လေ ကျေနပ်မှု့ ရလေလေပဲ။
12) လူမှာ လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိတွေကို များများထုတ်သုံးရမှ အဲ့ဒီလူဟာ ဘ၀ကို ကျေနပ်မှု့ရမယ်။
13) စိတ်ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားလာရင် ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားလာတယ် ၊ ဘ၀ဆိုတာ စိတ်ရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု့ပဲ။
14) ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးကို မြင့်မားစေချင်ရင် စိတ်ရဲ့ အရည်အသွေးကို မြင့်မားအောင် ကြိုးစားမှ ဖြစ်မယ် ၊ ဘ၀ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို စိတ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ပဲ တိုင်းတာသင့်တယ်။
15) အလေးနက်ဆုံး အသိညဏ်က ဘ၀နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသိညဏ်ပဲ။
16) ဘ၀ကို နောက်ဆုံးအချိန်ထိ အဓိပ္ပါယ် ရှိရှိဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။ အဲ့ဒီလို မသိလို့ရှိရင် အသက်ကြီးသွားတဲ့ အခါကြာလေ အသုံးမကျလေ ဖြစ်လာတယ်။ ကြာလေ အဓိပ္ပါယ် မရှိလေ ဖြစ်လာတယ်။
17) သေခြင်းတရားကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်သွားနိုင်မှာသာ လူ့ဘ၀ကို အောင်အောင်မြင်မြင် နေသွားတဲ့သူလို့ ဆိုနိုင်မယ်။
18) စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း တစ်ခဏတိုင်း တစ်ခဏတိုင်း ကို တန်ဖိုးထားနိုင်မှ ဘ၀ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘ၀ ဖြစ်မှာပါ။
19) ဘ၀ဖြစ်လာတာဟာ အသိညဏ်ရဖို့ ၊ အသိညဏ်ရဖို့ဆိုရင် စိတ်ဓါတ်မြင့်မားမှု့ ၊ စိတ်ဓါတ် မြင့်မြတ်မှု့ရှိမှ ဖြစ်နိုင်မယ်။
20) ဘ၀ တစ်ခုလုံးဟာ ကျောင်းပဲ။ မွေးတဲ့ အချိန်က စပြီး သေတဲ့ အချိန်အထိ ကျောင်းနေနေတာပါ။ ဒီဘ၀မှာ တွေ့ကြုံ ရသမျှ ကိစ္စတွေနဲ့ မြင်သမျှ ၊ ကြားသမျှ ကောင်းတာရော ၊ ဆိုးတာရော ၊ တစ်ခု မကျန် အားလုံးဟာ သင်ခန်းစာချည်းပဲ။ ယူတတ်ရင် ပညာနဲ့ အသိညဏ် ရတယ်။ ယူတတ်ဖို့ ဆိုတာလည်း အသိရှိမှ ဖြစ်မယ်။ မေ့တိမေ့လျော့နေရင်တော့ ပညာမရဘူး။ အသိညဏ်မရဘူး။
21) စစ်မှန်တဲ့ ဘ၀ ၊ မှန်ကန်တဲ့ဘ၀ ၊ အတုအယောင်မဟုတ်တဲ့ ဘ၀ကို နေသွားဖို့နဲ့၊ သေတဲ့အခါမှာလည်း ဘာမှ ဟန်လုပ်တာ၊ ဖုံးကွယ်တာ မရှိ၊ အမှန်အတိုင်း အရှိအတိုင်း သိပြီး သေဖို့က တကယ်ခက်ခဲ နက်နဲ့တဲ့ ဘ၀ပေးတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
22) လေးနက်တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အသိညဏ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအလုပ်ကို မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင် ဘ၀ကို တကယ်ကျေနပ်မှု့ မရနိုင်ဘူး။
23) ကိုယ့်အမှားတွေကို ကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ သိပြီးတော့ ပြင်ပြီး နေသွားရတာ ဘ၀မှာ ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံးအလုပ်ပါ၊ အားရစရာ အကောင်းဆုံး အလုပ်ပါ။
24) လူဟာ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်မှလည်းပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကိုကိုယ် ကျေနပ်မှု့ ရနိုင်မယ်။
25) ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးကို ကောင်းစေတာ အသိညဏ်ပဲ၊ ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးကို ပျက်စီးသွားစေတာ အအသိညဏ် မရှိခြင်းပဲ၊ အသိညဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ သတိရှိမှ ဖြစ်မယ်။ သတိမပါ ညဏ်မပါ ပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်ပြီဆိုရင် ဘာမှ မရနိုင်တော့ဘူး၊ ဘ၀ရဲ့ အရည်အသွေးတစ်ခုလုံး ကျသွားသည်အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
26) နေရာတကာမှာ ငွေနဲ့တိုင်းတာတတ်သူရဲ့ဘ၀ဟာ ကြာလေ တန်ဖိုးကျဆင်းလေ ဖြစ်လာမှာပဲ။
27) သေချာတဲ့ဘ၀ဟာ သေနေတဲ့ဘ၀ပဲ။
28) ကိုယ့်မှာ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အသိညဏ်အတွေးအခေါ် မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင် ဘ၀ဟာ တစ်မျိုးအဆင်ပြေပြီး နေရတာ ပျော်လာတယ်၊ ကိုယ့်လောကကြီး တစ်ခုလုံးဟာ ပြောင်းသွားတာ့၊ ကိုယ့်လောကကြီးကို ပြောင်း ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ လွဲနေတဲ့ မှားနေတဲ့ မသင့်တော်တဲ့သဘောထားတွေကို သတိနဲ့ သိနေပါ။
29) ဘ၀ကို ညံ့ဖျင်းသွားစေတဲ့ အရာတွေထဲမှာ သတိမပါ၊ ညဏ်မပါ ဖြစ်သလို နေတတ်လုပ်တတ်တာဟာ ထိပ်ဆုံးကပါနေတယ်။
30) ဘ၀အတွက် ပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့ပဲ ဘ၀ဆိုတာ ကုန်သွားတယ်။
31) ဘ၀ဟာ အင်မတန်တိုတောင်း၊ သူများတွေ မကောင်းကြောင်း ထိုင်တွေးနေဖို့ အချိ်န်မရှိပါဘူး။
Posted by Zaw Htet at 3:09 PM
[size=72][b]Cheap owergoclori software programm to Mac OS x[/b][/size]
[size=72][b]Cheap owergoclori software programm PC[/b][/size]
[size=72][b]Cheap owergoclori software on Windows[/b][/size]
Tie A Yellow Ribbon Around The Ole Oak Tree
Pho Kyaw's Song
Workaholic? or Chatkaholic? :)
ဆရာတော်ဦးဇောတိက ၏ တရားတော်များမှကောက်နှုတ်ချက်များ...